ကွန်ပျူတာထဲက ရှင်းလို့မနိုင်တဲ့ အမှိုက်ဖိုင်တွေအတွက် Wipe 2013 Pro ~ လမင်းတရာ
ကွန်ပျူတာထဲက ရှင်းလို့မနိုင်တဲ့ အမှိုက်ဖိုင်တွေအတွက် Wipe 2013 Pro
IN Cleaner, Software - ON 1:03 AM No comments
အဲဒီလို အသုံးပြုထားသမျှကို ကွန်ပျူတာက တစ်ခုမကျန် လိုက်ပြီး မှတ်သားထားပါတယ်
ဒီလိုမှတ်သားတဲ့နေရာမှာ History ဖိုင်တွေအဖြစ် မှတ်သားထားသလို Cookies ဖိုင်တွေအဖြစ်လည်း
မှတ်သားပါတယ် .. Temporary ဖိုင်တွေအဖြစ်လည်း မှတ်သားသလို အဆင်မပြေဖြစ်သွားတဲ့
ဖိုင်ပုံစံတွေကိုလည်း Junk ဖိုင်တွေအဖြစ်နဲ့ မှတ်သားပါတယ်
User တွေအတွက် ပြန်လည် အသုံးပြုရာမှာ အဆင်ပြေအောင်သာ အခုလို မှတ်သားတဲ့စနစ်ကို
ထည့်သွင်းထားတာ တကယ်တော့ ဒီလို မှတ်သားထားတဲ့ ဖိုင်တွေတော်တော်များများဟာ
၀င်းဒိုးစနစ်ကို နှေးကွေးလေးလံစေတဲ့ ဖိုင်တွေသာဖြစ်ပါတယ်
အဲဒီလိုဖိုင်တွေကြာင့်ပဲ .. ကျွန်တော်တို့ဟာ ကွန်ပျူကြီး လေးလံတာမျိုးကို ကြုံတွေဖူးသလို
အင်တာနက်အသုံးပြုတဲ့အခါမှာလည်း Website အချို့ထဲ ၀င်မရတာတွေ
Facebook ထဲ Log In ၀င်မရတာတွေ Char Box ရဲ့ ပုံစံတွေ ပြောင်းလဲနေတာမျိုးတွေ
အဲဒီအခါ Ccleaner လို ဆော့ဝဲမျိုးကို Run ပေးလိုက်မှ ပြန်ပြီး အဆင်ပြေသွားတတ်တာဟာ
ဒီ Cookies ဖိုင်တွေရဲ့ ဆိုးကျိုးပါပဲ ..
အခု ကျွန်တော်တင်ပေးထားတဲ့ ဆော့ဝဲလေးကတော့ Ccleaner လို ဆော့ဝဲမျိုးကတောင်
မရှင်းနိုင်လို့ ခပ်တည်တည်ချန်ထားခဲ့တဲ့ အမှိုက်ဖိုင်တွေကို ရှာဖွေရှင်းလင်းပေးနိုင်ပါတယ်
ဒါဆိုရင် ဒီဆော့ဝဲကို သွင်းထားပြီးရင် Ccleaner လိုဆော့ဝဲတွေ မလိုတော့ဘူးလားလို့
လိုပါတယ် .. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အခု ကျွန်တော်ပေးတဲ့ ဆော့ဝဲလေးက အမှိုက်ဖိုင်မှန်သမျှကိုသာ
ထိထိရောက်ရောက် ရှာဖွေရှင်းလင်းပေးနိုင်တာပါ .. Ccleaner လိုတော့ Registry ပိုင်းကို ပြုပြင်ပေးတာ
Disk Clean Up လုပ်ပေးတာမျိုးတွေကို မလုပ်ပေးနိုင်ပါဘူး ..
ဒီဆော့ဝဲလေးရဲ့အစွမ်းကိုသိချင်ရင်တော့ အရင်ဆုံး Ccleaner လို ရှင်းလင်းရေးဆော့ဝဲတစ်ခုကို
Run လိုက်ပါ .. အမှိုက်ဖိုင်တွေ မရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့ အချိန်ကျမှ
အခု ကျွန်တော်ပေးတဲ့ ဆော့ဝဲလေးကို Run လိုက်ပါ .. အမှိုက်ဖိုင်တွေ ရာချီပြီး ထုတ်ပြလာပါလိမ့်မယ်ကဲ လိုချင်တဲ့သူငယ်ချင်းများအောက်မှာ ဒေါင်းယူလိုက်ပါ ခင်မျာ.........
အထဲမှာ Setup ဖိုင် Keygen ချုံ့ဖိုင် နှစ်ခုထည့်ပေးထားပါတယ်
Setup ဖိုင်ကို Install လုပ်ပြီးတဲ့အခါ Keygen ထဲက exe ဖိုင်ကို
C >> Program files >> Wipe 2013 pro ဆိုတဲ့ ဖိုဒါထဲကို ကူးထည့်လိုက်ပါ
တက်လာတဲ့ Box ထဲက Replace ပါတဲ့ စာကြောင်းကို နှိပ်လိုက်ပါ
Keygen လို့သာပြောတာပါ တကယ်တော့ Crack ဖိုင်ကို Trail ဖိုင်နေရာမှာ အစားထိုးလိုက်တာပါပဲ
ကဲ . အဆင်ပြေကြပါစေဗျာ
Wipe 2013 Pro + Crack